Siyaasiyiin laga mamnuucay inay booqdaan dalka Faransiiska | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Siyaasiyiin laga mamnuucay inay booqdaan dalka Faransiiska
Siyaasiyiin laga mamnuucay inay booqdaan dalka Faransiiska
Wasiirka Arrimaha Dibedda ee dalka Faransiiska, Jean-Yves Le Drian ayaa sheegay in qaar ka mid ah Siyaasiyiinta dalka Lubnaan laga mamnuucay Faransiiska, kadib, markii ay ku fashilmeen inay dhisaan Xukuumad.
Wasiirka oo Shir Jaraa’id ku qabtay Jesiiradda Malta waxa uu ku eedeeyey inay Siyaasiyiintaasi ku kaceen Musuqmaasaq, inkastoo uusan faahfaahin kale bixinin.
Waxa kale oo uu sheegay inay Dowlada Faransiiska iyo Dowladaha Reer Europe ay qaadi doonaan Tallaabooyin ka dhan ah qaar ka mid ah Saraakiisha dalka Lubnaan ee weli ku lugta leh qalalaasaha Siyaasadeed ee ka taagan dalkooda.
Waddanka Lubnaan waxa uu bilaa Xukuumad ahaa tan iyo bishii August ee sanadkii hore, kadib, markii uu Ra’isul-wasaarihii dalkaasi, Xasan Dayib uu is-casilay, kadib, qarixii weynaa ee ka dhacay Dekedda Beyruut.
Tan iyo xilligaasi, Siyaasiyiinta dalka Lubnaan waxay ku fashilmeen dhismaha Xukuumad Cusub, iyadoo Siyaasigaasi Rug-caddaaga ee Sacad Al-xariiri xilkaasi loo magacaabay bishii October ee sanadkii hore, balse, weli ma uusan soo dhisin Xukuumad cusub.
Dowladda Faransiiska waxay hoggaaminaysay Baaqyada Caalamiga si loo dhiso Xukuumadda Cusub ee Lubnaan, iyadoo la ballan qaaday isbedel ballaaran oo lagu samaynayo Dhaqaalaha Lubnaan.
Faransiiska waxay Lubnaan u ballan qaadeen Xirmo Kaalmo Lacageed oo dhan 11 Billion oo Dollar sanadkii 2018-kii, si loo sameeyo Isbedel, balse, taasi weli ma dhicin.
Lubnaan waxaa gumeysan jiray Faransiiska, waxayna haatan leeyihiin Xiriir wanaagsan oo dhan kasta ah.
Siyaasiyiin laga mamnuucay inay booqdaan dalka Faransiiska was last modified: May 1st, 2021 by Admin
Taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada Puntland oo lagu dilay dagaal ka dhacay Gaalkacyo